कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीले जब आफ्नै हातमा हत्कडी लगाउन लगाए ... - Gandak News
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीले जब आफ्नै हातमा हत्कडी लगाउन लगाए …
गण्डक न्यूज द्वारा ७ श्रावण २०७६, मंगलवार ००:४१ मा प्रकाशित
समाजमा कलिला बाबुनानीहरुलाई पुलिस बोलाम् ? भनेर डर देखाउने गरिन्छ । प्रहरी डरलाग्दो चीज हो भन्ने मानसिकता सानै उमेरदेखि विकास गरिन्छ । त्यसैले पनि, पुलिसले समात्छ, पिट्छ, जेलमा कोच्छ भनेर बालबालिका प्रहरीसँग डराउँछन् । बाल मानसिकतामा परेको प्रभावले ठूलो भएसम्म पनि प्रहरीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्न हुन्न भन्ने सोच कायम छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्की आफै कार्यालयमा हत्कडी सहित देखिए । आफूमा लागेको हत्कडी खोल्न पनि उत्तिकै सकस प¥यो । गल्ती गर्ने अपराधी र अपराधको कसुर लागेकालाई लगाउने हत्कडी एसपी कार्कीको हातमा चाहिँ आफै किन लगाउन लगाए त ? एक दिन विद्यार्थीसँग कार्यक्रम अन्तर्गत जिप्रकामा विद्यार्थीहरु पुगेका थिए । र उनले सोहि विद्यार्थीहरुलाई प्रहरी र प्रहरीले काम गर्ने बारेमा विद्यार्थीलाई सिकाएका थिए । विद्यार्थीले हत्कडी के हो र किन लगाइन्छ ? भन्ने प्रश्नमा कार्कीले हत्कडीका बारेमा विद्यार्थीलाई बुझ्ने भाषमा प्रयोग गरेर नै देखाएका हुन् ।
सानैदेखि प्रहरी प्रति नकारात्मक भावना पैदा हँुदै आएकाले समुदायसँग प्रहरी नाराका साथ अघि बढेको प्रहरी संगठनले यस्तो अभियान सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सोमबार स्कुलकै पोशाकमा ४० जना साना बालबालिकाहरु पुगे । विद्यार्थीले कुनै गलत काम नै गरेका हुन् नत प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउनै गरेको हो । बालबालिकाको मन मस्तिष्कमा प्रहरी प्रतिको गलत छाप हटाउन कास्की प्रहरीले प्रहरी संग एक दिन अभियान संचालन गरेको हो ।
सोमबार पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जाको हेम्जा बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्यनरत ४० जना विद्यार्थीले १ दिन प्रहरी कार्यालयमा बिताए । हाल हप्तामा एक दिन यो अभियान संचालन भएपनि विद्यालय धेरै भएका कारण हप्ता भरि नै संचालन गर्न सक्ने प्रहरी उपरिक्षक कार्कीले बताए । अभियान अन्तर्गत सुरुमा प्रहरी को हो ? प्रहरीले के के काम गर्छ ? कस्ता मान्छेलाई पक्राउ गर्छ ? कुनै नराम्रो भयो भने कसरी प्रहरीलाई खबर गर्ने सकिन्छ भने सिकाएको उनले बताए । त्यसपछि प्रहरीको हरेक कक्षमा बालबालिकालाई लगेर देखाउने गरिन्छ ।
महिला तथा बालबालिका विभाग प्रमुख इन्स्पेक्टर चन्द्रा गुरुङले पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा, अपराध भए कसरी प्रहरी सम्झने भन्ने बारेमा सहजीकरण गरेकी थिईन् ।
प्रहरीसंग एक दिन बिताएपछि विद्यार्थीहरुले प्रहरी प्रतिको भ्रम हटेको बताए । उनीहरुले सबै सुनेर र देखे पछि प्रहरी त हाम्रो साथी पो रहेछ भन्ने थाहा भएको बताए ।